Mahajanga Fetim-pianakaviana mandritra ny telo andro ny “Star Tour” | NewsMada
Mahajanga Fetim-pianakaviana mandritra ny telo andro ny “Star Tour”
Niravona ny disadisa… Fiaraha-miasa tanteraka eo amin’ny orinasa Star sy ny kaominina Mahajanga ny hetsika “Star Tour”. Tanjona amin’izany ny hisian’ny fety iarahan’ny fianakaviana manontolo, mba hahazo ny anjarany ny rehetra.
“Tsy nisy mihitsy ny fanakanana ny fisotroana zava-pisotro misy alikaola, ary porofon’izany, misy ihany ny fivarotana labiera. Manamafy ny fanentanana sy ny fampahafantarana kosa anefa, mba ho tompon’andraikitra ny tsirairay”, hoy ny fanazavana nomen’ny ben’ny Tanànan’i Mahajanga, Mokhtar Salim, nandritra ny resadresaka nifanaovana tamin’ny mpanao gazety, omaly, tetsy amin’ny foiben’ny Star Andraharo.
Fetim-pianakaviana no hiseho ny 18,19 ary20 aogositra izao, any Mahajanga. Hiara-hatao amina toerana roa ny fety: eny amin’ny Bord sy ny torapasiky ny Grand Pavois. Vao maraina, fanentanana hataon-dry Fou Hehy sy Bahrone, eny amin’ny torapasika. Arahina fifaninanana beach volley, beach soccer, beach pétanque, sns, izany.
Fampisehoana isan-kariva ny eny amin’ny Bord. Hanomboka hanafana ny sehatra ry D’Alvis sy Nina’s ny zoma. Hanomboka amin’ny “carnaval” ny asabotsy atoandro, izay handraisan’ireo mpiara-miasa sy ireo sekoly, sns, anjara. Amin’ny efatra ora hariva, fety hosantarin’ny zumba, arahin’ny seho hataon’ny G5. Hofaranan’i Jaojoby sy ny tariny amin’ny fampisehoana ny salegy izany. Marathon ny alahady, iarahana amin’ny federasiona misahana azy ity. Hamarana ny andiam-pampisehoana ny hariva ry Rak Roots sy ny tarika AmbondronA, hialohavan’ny afomanga. Misy ny toeram-pilalaovana hatokana ho an’ny ankizy. Fampandihizana ho an’ireo tanora, iandraiketan’ireo mpikosoka kapilan’ny RDJ’s Team, ampian-dry Nicki Di Manu sy Dj Sniper.
Nanamafy ireo avy amin’ny Star fa hatao laharam-pahamehana ny fitandroana ny filaminana. Fanentanana mafimafy kokoa amin’ny zava-pisotro misy alikaola, indrindra ny fandrarana izany ho an’ireo tsy ampy taona sy ny mitondra vohoka. Nampanantena koa izy ireo fa hisahana ny fanadiovana mandritra sy aorian’ny fety.